कश्मीरको कारुणिक अन्तर्कथा
फाल्गुन २४, २०७५ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
काठमाडौँ — गर फिरदौस बर रुये जमीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त । ‘यदि धर्तीमा कहीं स्वर्ग छ भने यहीं छ, यहीं छ, यहीं छ ।’ यी पंक्ति कश्मीरको सौन्दर्यले मुग्ध फारसी सूफी कवि, गायक, संगीतकार अमीर खुसरोले त्यस भूमिको वर्णनातीत सौन्दर्यको गान गर्दै भनेका, गाएका थिए, आजभन्दा करिब सात सय वर्षपूर्व । कश्मीर छ पनि त्यस्तै मानौं धर्तीमै स्वर्ग ओर्लिए जस्तै ।
कवि कल्हणले राजतरंगिनी रचना गरेको भूमि, विशिष्ट शैव दर्शन अर्थात् कश्मीर–शैवको उद्गमस्थल, बौद्धहरूको ध्यानस्थली, हिन्दू, बौद्ध र इस्लाम तीनै आस्थाको समागम गर्ने सूफी मतको क्रीडास्थल कश्मीर, प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले त अनुपम हो नै, आध्यात्मिक उच्चताको कर्मस्थलीसमेत रहेको हो । त्यहीं अमरनाथ गुफामा स्वयं बन्ने हिम शिवलिंगको दर्शन हुन्छ ।
झेलम नदीमा सिकाराहरू (हाउस बोट) अर्थात् पानीमा तैरिरहेका घरहरू छन्, घर नै ‘पानीजहाज’ । यो यता हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सपनाका पानीजहाजको जस्तो दृश्य होइन, कश्मीरका जीवन्त सौन्दर्यको परिदृश्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाजको सपना कहिले, कसरी साकार होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
तर नेपालको राजधानी काठमाडौंदेखि आकाशमार्गबाट करिब १ हजार ७२ किलोमिटर उत्तर–पश्चिम कश्मीर उपत्यकाको शान्त झेलममा पानीमा तैरिरहेका घरहरू छन् । हिमाच्छादित पर्वतमालाले घेरिएको कश्मीर उपत्यका यस लोकमै अलौकिक प्रतीत हुन्छ । झेलमको शान्त बहावमा स्वर्गिक माधुर्य छ । कश्मीरीहरू हस्तकलामा पनि नामी छन् । कश्मीरका पश्मिना र सल विश्व प्रसिद्ध छन्, त्यहाँका स्याउको स्वाद अन्त कतै पाइँदैन ।
तर कश्मीरबारे अचेल यी विषयहरू समाचार, विश्लेषण, विचार बन्दैनन् । समाचार आतंक, हिंसा, हत्याका आउँछन् । लस्कर–ए–तयवा, जैश–ए–मोहम्मद जस्ता आतंककारी संगठनका खबर आउँछन् । युवामा फैलिँदो निराशा र त्यही निराशाको जगमा उभिएको आतंक । अचेल त्यहाँ, माथिका हरफहरूमा वर्णित प्राकृतिक सौन्दर्यजस्तै जीवन छैन । दग्ध–दग्ध आतंकित छ, जनजीवन । न त्यहाँ पर्यटकहरू ढुक्कसँग विचरण गर्दै दर्शनीय स्थलहरूको दृश्यावलोकन गर्न पाउँछन्, न झेलमका सिकारामा समय व्यतीत गर्न ।
पृथकतावादी विद्रोहीहरूले कहिले कसलाई तारो बनाउने हुन् र कहिले कसलाई बन्दी अत्तोपत्तो हुँदैन । सैनिकहरूको गस्ती, खोजतलास (सर्च अपरेसन) तथा विद्रोही र सुरक्षाकर्मीबीच हुने गोली हानाहानले कश्मीरको आत्मा पछिल्ला ७२ वर्ष त्यसमा पनि विशेष गरेर विगत ३० वर्षदेखि चिथोरिइरहेको छ । विशेष गरेर किनभने कश्मीरमाथि अत्याचार हुनथालेको कम्तीमा ६ सय वर्ष बितिसकेको छ । ६ सय वर्षको करूण कथा, फेरि कुनै बेला लेख्नेछु अवश्य । तर पछिल्ला ३० वर्षमा प्रदेशभित्रै वैमनष्य अरु चुलिएको छ ।
फागुनको पहिलो साता पुलवामामा एउटा स्तब्ध पार्ने आत्मघाती आक्रमणमा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि कश्मीर विश्वभरका समाचार माध्यमहरूको हेडलाइन बन्यो । त्यसको ९ दिनपछि भारतीय वायु सेनाले पाकिस्तानी खैबार पख्तुनवा प्रदेशको बालकोटमा पृथकतावादी संगठन जैश–ए– मोहम्मदको प्रशिक्षण केन्द्रमा आक्रमण गरेको समाचारसँगै यसअघि चारपटक (स्वतन्त्रता लगत्तै सन् १९४७, १९६५, १९७१, यसमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पाकिस्तान टुक्र्याएर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बंगलादेश बनाइएको थियो र सन् १९९९ को कार्गिल) युद्ध गरिसकेका भारत र पाकिस्तानबीच अर्को युद्ध हुनसक्ने आशंकाले कश्मीर मात्र होइन, समस्त दक्षिण एसिया नै त्रस्त भयो ।
विश्व नेताहरूले भारत र पाकिस्तानलाई संयम धारण गर्न आग्रह गरे । त्यसमा पनि दक्षिण एसिया त्रस्त हुनपर्ने कारण झनै छ, किनभने भारत र पाकिस्तान दुबै आणविक शक्ति सम्पन्न देश हुन् । कथं युद्ध चर्किए यस क्षेत्रका कुनै पनि देश आफैंमा सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था छैन । भारत–पाक बीचको वैमनष्य त्यसै पनि यस क्षेत्रको शान्ति, सुव्यवस्था र प्रगतिका निम्ति बाधक बनिआएको छ ।
भारत र पाकिस्तानबीच वैमनष्यका चल्ते दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्य एक प्रकारले असम्भव जस्तै छ । दक्षिण एसियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ठट्यौलीजस्तै बनेर रहेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच केको झैझगडा छ, किन छ भन्ने विषयलाई धेरैले केवल जुँगाको लडाइँ भन्ने गरे पनि कारण त्यतिमात्र होइन । विवादको, झैझगडा र बारम्बार उपस्थित भइरहने युद्धजन्य अवस्थाको प्रमुख कारण हो– कश्मीर र विभाजनका तुष ।
सन् १९४७ मा भारत विभाजन सँगैजसो कश्मीर कसको भन्ने प्रश्न किन उपस्थित भयो भने मुसलमान बहुल कश्मीरका राजा हिन्दू थिए । पाकिस्तानका नेताहरूको जनता मुसलमान भएपछि कश्मीर आफ्नो भूभागमा पर्नुपर्ने जिकिर रहेको थियो । तर जम्मू–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरिसिंह भने भारत, पाकिस्तान कतै पनि नमिसिने अडान लिएर बसेका थिए । ज्ञातव्य छ, तत्कालीन भारतको विभाजन धार्मिक आधारमा भएको थियो ।
पाकिस्तानको निर्माण नै इस्लामी राज्य बनाउने प्रयोजनले भएको हुँदा हिन्दू, सिख र जैन बहुल क्षेत्रमा भारत नै कायम रहने तर मुसलमानहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रमा पाकिस्तान बनाइएको भनियो । अग्रिम मोर्चामा मुस्लिम लिगका नेता मोहम्मद अली जिन्ना देखिए, तर त्यो भारतका औपनिवेशिक शासकहरूले अर्थात् बेलायतीहरूले जाँदाजाँदै खेलेको अत्यन्त खतरनाक खेल थियो र त्यस खेलमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू पनि फँस्न पुगेका थिए ।
अन्ततः धार्मिक आस्थाका नाममा भारतको विभाजन भयो । विभाजनका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । करिब ३३ लाख बेघरबार भए, अलपत्र परे । त्यस विभाजनमा भएको मानवीय क्षतिलाई इतिहासकै एउटा दुर्दान्ततम घटनाका रूपमा चित्रण गरिन्छ र त्यही घटनाले हिन्दू र मुसलमान बीचको वैमनष्यलाई संस्थागत गरेको हो भनेर मान्दा हुन्छ । किनभने भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको लामो यात्रामा दुबै समुदाय साथसाथै थिए, अखण्ड भारतको स्वतन्त्रता दुबैको साझा उद्देश्य थियो ।
विभाजनपछि पाकिस्तानमा जेजति बाँकी हिन्दू र सिखहरू थिए, निरन्तर प्रताडनाका सिकार भए । त्यहाँ उनीहरूको कुनै हैसियत रहेन । इस्लाम नै राज्यको धर्म र गैरइस्लाम सबै काफिर भए । त्यस्तै भारतमा रहन गएका मुसलमानहरू, कानुनी संरक्षण रहे पनि हमेशा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा हेरिए । धार्मिक अतिवादकै कारण स्वतन्त्रताको वर्षदिन नबित्दै महात्मा गान्धीको हत्या भयो । त्यसभन्दा पहिलै स्वतन्त्रता संस्थागत हुन त कताकता, विभाजन लगत्तै पाकिस्तानले भाडाका कबाइली प्रयोग गरेर कश्मीर कब्जा गर्ने तरिका अवलम्बन गर्‍यो ।
कश्मीरलाई स्वतन्त्र राज्य राख्ने मनसुवा लिएका त्यहाँका तत्कालीन राजा हरिसिंह अत्तालिएर पाकिस्तानबाट कश्मीर बचाइमाग्न दिल्लीसँग सहयोगको याचना गर्न पुगे । पाकिस्तानको दाबी र हमला तथा हरिसिंहको भारतसँग याचनासँगै कश्मीरको भावी मानचित्र कोरिँदै थियो । भारतले कश्मीर भारतीय गणसंघमा सामेल भएमात्र पाकिस्तान विरुद्ध कारबाही गर्नसक्ने सर्त राख्यो । हरि सिंहसँग कुनै अर्को विकल्प थिएन, उनले जम्मू–कश्मीरलाई भारतीय गणसंघमा सामेल गर्ने ‘इन्सट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’मा हस्ताक्षर गरे । त्यस लगत्तै भारतले आफ्नो सेना परिचालन गरेर कश्मीरभित्र पसेका पाकिस्तानद्वारा भाडामा प्रयोग गरिएका कबाइली विरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको थियो ।
त्यसपछि मामिला संयुक्त राष्ट्र संघमा पुग्यो र कश्मीरमा युद्धविराम रेखा कायम भयो । त्यतिबेला जम्मू–कश्मीरको करिब एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तान तथा दुई तिहाइमा भारतको आधिपत्य कायम भयो । त्यही युद्धविराम रेखालाई पछि गएर नियन्त्रण रेखा (एलओसी) भन्न थालिएको हो । तर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारत अधीनस्थ जम्मू–कश्मीरको २० प्रतिशत भूभागमाथि चीनले आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्‍यो ।
अर्थात् भारत स्वतन्त्रता–ताकाको जम्मू–कश्मीरको नक्सामाथि आज तीन अलग देशको शासन छ । एक तिहाइमा पाकिस्तान, जम्मा भूभागको करिब २० प्रतिशतमा चीन र बाँकी भूभागमा भारतको शासकीय नियन्त्रण छ । अहिले जुन जम्मू–कश्मीरको बढी चर्चा हुने गर्छ, त्यो भारत अधीनस्थ कश्मीरको वस्तुस्थिति हो । तर पाकिस्तान अधीनस्थ भूभागमा बस्ने कश्मीरीहरूको अवस्था के कस्तो छ, तिनको कुनै चर्चा नै भइरहेको छैन । त्यस्तै चीन अधीनस्थ क्षेत्रमा के भइरहेको छ, त्यसबारे कुनै खोजिनिती भएको पाइँदैन ।
कश्मीर समस्याको समाधान के त ? कसले खोज्ने, परस्परमा वैमनष्य पालिरहेका, विगतमा चारपटक युद्ध गरिसकेका भारत र पाकिस्तानले आफैं खोज्छन् कि यसमा तटस्थ मध्यस्थता चाहिन्छ ? फेरि यस जटिलतामा चीन पनि अंशियार हो, किनभने जम्मू–कश्मीरको २० प्रतिशत भूभागमाथि उसैको कब्जा कायम छ । कश्मीर समस्याको स्थायी समाधान खोज्न जम्मू–कश्मीरको भूक्षेत्र, पूर्ववत अर्थात् सन् १९४७ कै अवस्था हुनु नै न्यायसंगत हुन्छ र हुनु पनि त्यही पर्छ ।
नियन्त्रण रेखाहरू मेटिनुपर्छ । तब बल्ल थाहा हुन्छ, कश्मीरको चाहना, कश्मीरीहरूको आकांक्षा । केवल भारत अधीनस्थ–कश्मीरमा समस्याको समाधान खोजेर यसको स्थायी समाधान सम्भव छैन । सम्पूर्ण अर्थात् भौगोलिक अखण्डतासहितको जम्मू–कश्मीर नै कश्मीरको समुच्च व्यक्तित्व हो । यसो हुँदा नै कश्मीरबारे गुनगुनाइने अमीर खुसरोका पंक्तिहरू सार्थक र पुनः जीवन्त हुन सक्छन् । गर फिरदौस बर रुये जमीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त । अर्थात् ‘यदि धर्तीमा कहीं स्वर्ग छ भने यहीं छ, यहीं छ, यहीं छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:३४